2018 Pool & Spa News Top 50 Builders List - Aquark Electric Co., Ltd
Mr. Fahanginana-Stepless DC Inverter Pool Heat Pump
Eto isika dia miaiky ny mpanao trano izay hamirapiratra indrindra amin'ny vola miditra sy ny mason-tsivana efatra hafa izay mandrafitra ny format manan-tompo ny rijan fitsarana.
Mpanao trano avy any Etazonia no nitatitra maika, asa, ary mampiseho amin'ny vondrona ity. Fitambarany, ireo orinasa nanao dobo 12.164 tamin'ny taona 2017, karama $ 746,9 tapitrisa amin'ny fanorenana toeram-ponenana vaovao sy $ 69,9 tapitrisa ao amin'ny fanavaozana vola miditra.
Ao amin'ny pejy manaraka, dia afaka mianatra momba ny olona manan-danja antontan'isa Top 50 orinasa.
Ireo orinasa taratry raharaha rehetra karazana modely, miaraka amin'ny boky 2017 manomboka amin'ny 7 ny mihoatra ny 1100, ary eo ho eo ny vidin'ny dobo manomboka amin'ny $ 41.000, ary nahatratra maherin'ny antsasaky ny iray tapitrisa dolara. Vola miditra miainga amin'ny $ 5.5- ny $ 57 tapitrisa.
Fito orinasa nanao ny lisitra voalohany. Fa, indray mandeha indray, Texas manjaka, miaraka amin'ny orinasa 16, na 32%.
-Paritra isan-karazany sarintany dia toerana avo achievers manerana ny firenena. Hianao koa dia hianatra izay nolavin'ny mpanao trano nitsangana avy isaky ny dimy tsirairay fepetra - izay nahazo ny ankamaroan'ny vola miditra, nampiseho ny ambony indrindra ambaratonga ny mpiasa fitantanana sy ny fampiofanana, dia nandray anjara indrindra amin'ny samy orinasa fikambanana sy ny fiaraha-monina, ary nirehareha ny manaitra indrindra tranonkala anatrehan'ny . Voatenona ao amin'ny pejy, orinasa manaja ny mpilalao manan-danja indrindra.
Ny fonosana dia ahitana ihany koa ny fitrandrahana ny fomba izay ny vato nasondrotry ny vato nasondrotry mitantana handray, lamasinina, ary hihazona mpiara-miasa ao amin'ny asa amin'izao fotoana izao krizy. Farany, dia manolotra ny Top 5 eo amin'ny mpanjifa. Ireo Top 50 Builders nahatratra ny marika ambony indrindra mifototra amin'ny mpanjifa-service fanadihadiana ataon'ny Atlanta-monina hentitra GuildQuality. (Tsy ny rehetra mpanao trano ambony 50 nandray anjara tamin'ny fandaharana io, tahaka ny tsy voatery.)
Hitsena ny 2018 PSN TOP 50 mpanao trano
TOP 50 2017 mpanao trano vola miditra
Vokatra tamin'ity taona ity ny mpanorina miainga amin'ny vola miditra, fa nahazo rehetra mihoatra ny $ 5 tapitrisa tamin'ny 2017. Total Residential fanorenana no asongadina ao amin'ny manga noho ny maha zava-dehibe amin'ny famaritana ny Top 50.
TOP 10 Residential CONSTRUCTION vola miditra
Residential Construction Revenue dia nokajiana avy natambatra vola avy amin'ny toeram-ponenana vaovao fanorenana sy ny fanavaozana goavana. Ary tamin'ny dimy mitsara fepetra, izany lafin-javatra ao amin'ny tena. Indray mandeha indray, Cody Pools, ny foibeny akaikin'i Austin, nihoatra ny lisitry ny ambony indrindra earners. Ary niteraka efa ho $ 50 tapitrisa amin'ny fanorenana trano fonenana, misolo tena ny efa ho 13% nitsambikina avy amin'ny tamin'ny taona lasa $ 44,2 tapitrisa. Cody miray amin'ny dimy Lone Star State mpiray tanindrazana eto amin'ity Top 10 lisitra. Telo amin'ireo orinasa sisa havandra avy any Arizona, ny farany avy any Kalifornia. Tamin'ny fanorenana trano fonenana, amin'ity taona ity vondrona Nahazo $ 816,8 tapitrisa, ny 5% Fitomboana ny 2017 Top 50, izay nitatitra fanorenana toeram-ponenana ho an'ny fitambaran'ny vola $ 777.9M.
TOP 10 TOTAL fidiram-bola
Raha tanteraka vola miditra dia tsy heverina ho anisan'ny mason-tsivana ny fitsarana, ambany-liners te-hahafantatra foana io isa io. Fa ny Top 50, toeram-ponenana tsara fanorenana vatofantsika ankapobeny fidiram-bola, izay manazava ny antony lisitra ity overlaps akaiky ny Top 10 fanorenana toeram-ponenana earners. Na izany aza, ireo orinasa tsy manao fotsiny toeram-ponenana sy ny Spas dobo. Ny tatitra rehetra fa dimy fanompoana vola miditra, izay nanampy hatramin'ny $ 104 tapitrisa ho an'ny vondrona. Fito amby roa-polo nanao asa ao amin'ny sehatry ny ara-barotra, ho tanteraka ny $ 74.5 tapitrisa. Toy izany koa ny tatitra isa antsinjarany amounting fidiram-bola ho mitambatry ny $ 46,3 tapitrisa. Amin'ny ampahany noho izany fahasamihafana, ny Top 50 ny ankapobeny vola nihoatra $ 1 lavitrisa tamin'ny 2017.
Amin'ny fanombanana ity sokajy ity, mijery ny mpitsara eo ho eo ny orinasa fotoam eo ny tehina, miaraka sy ny fari-fampiofanana sy ny fanabeazana, araka ny hita eo amin'ny in-trano fiofanana regimens, mitohy ny fampianarana, diplaoma sy certifications. Ireo ambany nahazo isa avo indrindra amin'ny fepetra io. Izy ireo voatanisa manaraka ny abidia, toy ny orinasa maro matetika no nahazo ny isa mitovy.
TOP 10 IN TAOZAVA-BAVENTY anjara
Fa ity sokajy ity, ny orinasa mpanao trano voatanisa fikambanana mba izay anisan'ny, na ao anatiny sy ivelan'ny orinasa. Ao amin'ny kamory / Spa-lafiny indostria, ny Top 50 dia naneho mahery foana anatrehan'ny lehibe ao amin'ny fikambanana sy antoko-mpitory mividy. Ivelan'ny orinasa, ny ankamaroan'ny isan 'ny an-toerana ny varotra Chambers, Better Business birao sy ny trano an-trano ny fikambanana. Ankehitriny, hita kokoa ireo orinasa dia nandray anjara mifandraika fikambanana, toy ny Amerikana Concrete Institute, American Shotcrete Association sy ny isan-karazany eo an-toerana ary fikambanana tontolo firenena.
TOP 10 NY WEB FANATREHAN'I
Ny tranonkala no ho avy - ary ny ho avy izao. Noho izany antony izany, dia mijery entrants 'anatrehan'i aterineto, anisan'izany ny vohikala sy haino aman-jery sosialy kaonty. Ireo mpanao trano no mandroso mazava tsara amin'ny alalan'ny haino aman-jery sosialy safidy. Rehetra fa ny iray ihany no tao amin'ny Facebook sy ny rehetra afa-tsy ny telo amin'ny Houzz. Ankehitriny, dia mifindra ho amin'ny tranonkala fifampizaràna lahatsary YouTube sy ny sary fizarana toerana Instagram, tsirairay izay milalao eny amin'ny 36 Ary tamin'ny Top 50.
TOP 10 IN COMMUNITY anjara
Hisongadina eo amin'ny fiaraha-monina tsy mandrisika zom-pirenena tsara, fa tsara raharaham-barotra. Ireo orinasa manandratra ny lisitra ho an'ny mpanao asa soa fanomezana vola, vokatra sy ny fotoana. Orinasa dia voatanisa manaraka ny abidia, toy ny multiples nahazo isa mitovy. Fa ny marika ambony indrindra nankany Claffey Pools; Platinum Pools; ary ny Filoham-Pools, Spas sy Patio.
Post fotoana: Jun-11-2018
Address: Keyuan roa Road, Gaoli Development Zone, Ronggui, Shunde District, Foshan, PRChina 528306